तिमीहरु बच्चै छौ, एता सुुन केटाकेटीहरु हो ! युवा त म हुँ – तहल्काखबर
तिमीहरु बच्चै छौ, एता सुुन केटाकेटीहरु हो ! युवा त म हुँ
‘म कछुुवाको पर्याय हो, आखिर बाजी मारि छोड्छुु । मैले धेरैवटा बाजी मार्नुु छ । मेरो खेल अन्त्य नभएसम्म तिमीहरु प्याराफिटमै धैर्यतापूूर्वक बसेर हेर ।’
विर्तामोड / तिमीहरु खूूब आफुुलाई युुवा भन्दै डुुक्रदैछौ होइन ? के हो युुवा भनेको, थाहा छ तिमीहरुलाई ? म तिमीहरुको उमेर समुुहमा रहदाँ तिमीहरु कोही कोखमै थियौ त कोही त जन्मने प्रकृयामा नि थिएनौ ।
तिमीहरु बच्चै छौ, यूूवा होइन । यूूवा त म भर्खर हुुदैछुु, तीन बर्ष अघि त दुुइकोरी उमेर पार हुुदैछ । मैले सानैदेखि अग्र्र्यािनक खाना मात्र खाएको छुु किनकी मेरो पालामा विषादीको आविष्कार नै भएको थिएन ।
त्यसैले म सात आठ कोरी उमेर त सजिलै बाँच्छुु । अनि, त्यत्रो बाँच्ने प्रक्षेपण गरेको मलाई यूूवा होइन भन्दै खिसिटिउरी गर्ने तिमीहरु बच्चा नभए को हौ त ?
मैले यहाँसम्म आइपुुग्न कति संघर्ष र बलिदानी गरेको छुु त्यसको सबै हिसाब किताब छ मसंग । अनि जाबो एक दुुई पद प्राप्त गर्दैमा मेरो बलिदानको हिसाब मिलान हुुन्छ ? झन मेरा बा–आमाले यहाँसम्म मलाई पुुर्याउन कति कष्ट झेल्नुुभो, त्यो सबै मैले चुुक्ता नगरि पद छोडेर भाग्न मिल्छ ? उनीहरुको आत्माले सराप्तैन ? अलिकति पाप र धर्मको नि ख्याल राख्ने गर न ।
कि तिमीहरु धर्म नमान्ने कम्युुनिष्ट जाती हौ ? तिमीहरुलाई हेक्का होस, म जस्तो नैतिकवान, आदर्श, कर्मठ, बुुद्दिजीवि र चाणक्य नीतिमा चतुुर र पारङगत खेलाडी अझै धेरै समयसम्म संस्था र सिगो मुुलुुकलाई आवश्यक छ ।
फेरि समय,परिस्थिति र इतिहासको कालखण्डले मलाई प्रमुुख भूूमिकामा उभ्याएको यथार्थलाई आत्मसाथ नगरि भाग्न मिल्छ र ? जिम्मेवारी पूूरा गर्न भूूमिका बिहीन भएर सम्भव छ ?
यूूवा नेताहरु गिरीजाप्रसाद कोइराला, शुुशील कोइराला अल्पायूूमै बित्नुुभो । राष्ट्र कविलाई हेर, एक शताब्दी पुुग्दा पनि सदैव युुवा । अनि मलाइ चै युुवा नदेख्ने तिमीहरुको आँखा भदौ मै फुुट्या हो कि रतन्धो लाग्या हो ? या त तिमीहरु आलाकाँचा ठेट्नाहरुको म प्रतिको प्रतिशोधको भावना बाहेक अरु के हुुनसक्छ ?
काम गर्ने मान्छेको चालै बेग्लै हुुन्छ । कछुुवाको गति हेर, कति सुुस्त र शालीन छ । अनि उमेर हेर, तीनसय बर्ष । उमेर कति ? तीनसय बर्ष । धेरै बर्ष जीउनेहरुको गति त्यस्तै नै हुुन्छ । आखिर बाजी पनि मार्छ अन्त्यमा उसैले । हतार गरेर कुुनै पनि काम बन्दैन ।
त्यसैले पर्ख, मलाई बाजी त जित्न देओ । मैले जित्ता तिमीहरुको पनि त नाक घोक्रिन्छ होला नी । होइन र ? म तिमीहरुको संरक्षक हुु, अभिभावक हुु, प्रेरणाको स्रोत हुु, जीवनदाता हुु, कर्मदाता हुु, सबैथोक आखिर तिमीहरुको म नै त हुु नि ।
आवेशमा नआउ, समय र परिस्थितिलाई बुुझ । अनि एकाध घण्टा ब्वाइफ्रेण्डलाई गर्लफ्रेण्डले स्टेशनमा कुुर्नुुपर्दाको पीडा र आक्रोश अनि वेदना र रोदनको प्रस्फुुटन भएजस्तो किन गर्छौ तिमीहरु ?
बाटोमा ट्राफिक जाममा पर्दा बा–आमालााई दोष दिन मिल्छ र ? म त तिमीहरुको बुुवा समानको मान्छे । जताततै जाम छ, भीड छ , त्यही भीडको बीचमा होडबाजी छ, कस्तो विषम अवस्था छ यहाँ, बुुझेका छौ तिमीहरुले ?
त्यस्तो परिस्थितिमा पनि म अरुलााई उछिनेर अब्बल सावित भै यहाँ आइपुुगेको मान्छे ।
आज पनि लिगलिगको दौड हुुने हो भने मेरो प्रतिस्पर्धी शायदै होला । धैरै रगत , पसीना र संघर्ष अनि साम दाम, दण्ड, भेद सबै आवश्यक छ यहाँ आईपुुग्न र तत्पश्चात टिक्न ।
त्यसैले मैदानमा जाउ, संघर्ष गर, म जस्तै विषादीमुुक्त खानेकुुरा खाएर शारिरिक र मानसिक रुपमा अब्बल बन । परिवार संगै तिम्रा बालापन बिताऊ । उमेर र अनुुभव दुुवै मेरो जस्तै बनाऊ र परिपक्क भएपछि मात्रै रिङमा आऊ, हतार नगर !
मेरा साना दुुखले आज्र्याको पद होइन, सबैलाई चेतना भया । तत्पश्चात मेरो अब्वलता, इमान्दारीता, पदलोलुुप बिहिनता प्रस्तुुत र प्रमाणित गर्न मैले के सम्म गरिन होला ।
कुुन कुुन शक्ति केन्द्रको पूूजा गरिन होला मैले । मेरो जस्तो परिश्रम र कुुर्वानी गर्न सक्छौ तिमीहरुले ? भाइबहिनी, छोराछोरीहरु हो ! गणेश र कुुमारको कथा सुुनेका छौ तिमीहरुले ? आमा बुुवालाई जसले खुुसी पार्न सक्छ उसैले साथ, सहयोग, समर्थन र श्री प्राप्त गर्दछ । भनेसि मैले मेरा बा–आमाले मेरो बहुुप्रतिभाशाली व्यक्तित्वमाथि विश्वास गरेर सुुम्पेको ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट भाग्न सुुहाउछ ?
अन्त्यमा, सुुन मेरा प्यारा भाइबहिनी, छोराछोरीहरु ! आवेशमा नआउ । पर्ख, धैर्य धारण गर । ब्यालेन्स डाइट खाऊ । धेरै बाँच्ने उपाय सिक, सुुत्रपाठ गर, प्रण गर । आत्तिएर र मात्तिएर हँुुदैन । राम्ररी सोच । सम्झ र बुुझ ।
यो तिमीहरुको राजनीति गर्ने समय होइन । स्कूूल, कलेज जाऊ । पढ्न मन नलागे बिदेशतिर जाऊ । त्यो पनि नभए नेपालमै सानोतिनो नोकरी गर । तर मेरो बाटोमा अवरोध नगर ।
म कछुुवाको पर्याय हो, आखिर बाजी मारि छोड्छुु । मैले धेरैवटा बाजी मार्नुु छ । मेरो खेल अन्त्य नभएसम्म तिमीहरु प्याराफिटमै धैर्यतापूूर्वक बसेर हेर ।
लेखक युवासंघ नेपालका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य हुन् ।
पत्रकार महासंघ मार्फत पत्रकार पकुवालको उपचारमा २ लाख ५१ हजार सहयोग
२०७५ श्रावण २६ गोपिन पोखरेल
विकासप्रेमी नेता सीपी कडरिया भन्छन् : ‘सरकारको नेतृत्व ओली र पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नु पर्छ’
२०७४ पुष ११ December 26, 2017 गोपिन पोखरेल
हवाई दुर्घटना उद्धारको यो कोण
२०७४ चैत्र ५ गोपिन पोखरेल